သစ်ခွပြုစုစောင့်ရှောက်မှု - ဤအကြံပြုချက်များနှင့်သင့်သစ်ခွ Bloom နှင့်အတူ
သစ်ခွပြုစုစောင့်ရှောက်မှု - Sun ကသူတို့ရဲ့သစ်ခွပွင် | အိမ်သူအိမ်သားအပင်
သစ်ခွတိုက်ရိုက်ပေါင်းစပ်ပန်းပွင့်ဒါခေါ် Asteraceae, angiosperms ၏လယ်ပြင်တွင်ဒုတိယအကြီးဆုံးအုပ်စုတစ်စုနောက်ကွယ်မှဖြစ်ကြသည်။
သူတို့ကအထူးသဖြင့်လှပသောစဉ်းစားနေကြသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်, ထိုသစ်ခွအများအပြားပန်းပွင့်ချစ်သူများအပင်၏မိဖုရားအဘို့ဖြစ်၏။
အဆိုပါသစ်ခွများ၏မတူကွဲပြားကြီးမားသည်။ ယေဘုယျအား 30.000 အသိအမှတ်ပြုမျိုးစိတ်အထိရှိပါတယ်။ အောက်ပါစာသားစောင့်ရှောက်မှုနှင့်သစ်ခွများ၏ကောင်းသောကိုင်တွယ်တချို့အကြံပေးချက်များနှင့်လှည့်ကွက်ဖော်ပြသည်။ ထို့ပြင်မကြာခဏလုပ်နေကြတယ်သစ်ခွများ၏စောင့်ရှောက်မှုတှငျအဘယျအမှားများကိုစဉ်းစားပါ။
သို့သော်သစ်ခွများ၏စောင့်ရှောက်မှုအတွက်ဖန်ဆင်းနိုင်အနည်းငယ်အမှားတွေရှိပါတယ်။ ဖြစ်ပျက်မှဤတားဆီးနှင့်သစ်ခွသက်သာခံစားရဖို့, အောက်ပါစာသားကိုညာဘက်ထိုသို့ပြုမှဘယ်လိုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ပေးစွမ်းသည်။
အဆိုပါသစ်ခွများ၏ကြီးထွားမှုကိုအကောင်းဆုံးညာဘက်အခြေအနေများနှင့်အတူထောက်ခံနိုင်ပါတယ်။ ဒါကသစ်ခွစက်ရုံအိုးများအတွက်သင့်လျော်သောများ၏ဝယ်ယူပါဝင်သည်။ ဤတွင်, အိုးအရွယ်အစားအလွန်အရေးကြီးသည်။ အိုးသင့်ရဲ့သစ်ခွစက်ရုံများအတွက်သင့်လျော်သောသောကျိုးကြောင်းဆီလျော်အရွယ်အစားရှိကြောင်းသေချာပါစေ။
ဒါကသစ်ခွအိုးကြီးမားလွန်းမဖြစ်သင့်ကြောင်းဆိုလိုသည်။ ဤနောက်ခံသစ်ခွများ၏စက်ရုံအိုးတည်ငြိမ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ရန်ကြီးမားသောအိုး၌သို့သော်ရည်မှန်းချက်တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးမရနိုင်ပါ။ အဆိုးဆုံးမှာသစ်ခွစနစ်တကျကြောင့်ကြီးမားလွန်းအိုးမှမထောက်ပံ့ပါ။ အပွင့်အကောင်းဆုံးကြီးထွားနိုင်အောင်သို့သော်ဤလိုအပ်ပါသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, နေရာပိုကျပိုကြီးထွားမှု, ဒါပေမဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်မဆိုလိုပါ။ သငျသညျကြီးမားလွန်းတဲ့အိုးကိုဝယ်လျှင်, ထိုစက်ရုံထိခိုက်စေပါတယ်။
မကြာခဏဒီအမှား လုပ်. ထူထောင်စက်ရုံနေဆဲကြီးထွားရန်မျှော်လင့်ကြောင်းနှင့်ပြီးသားအစအဦး၌ဤအဘို့ပြဌာန်းချက်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သျောလညျး, သင်သည်သင်၏စက်ရုံကြီးထွားမှုအတွက်အရေးပါသောအခွအေနေယူပါ။ သူတို့ရဲ့အိုး၌မျှမတည်ငြိမ်မှုအားလက်ခံတွေ့ဆုံသည့်သစ်ခွ, ကောင်းစွာကြီးထွားမည်မဟုတ်။ ထို့ကြောင့်သေးငယ်တဲ့အိုးကြိုက်တတ်တဲ့ access ကိုပါ။ အဆိုပါသစ်ခွများ၏အမြစ်များကိုအကောင်းဆုံးတည်ထောင်ရန်အခွင့်အလမ်းရှိသည်သကဲ့သို့။
ထို့အပြင်သေးငယ်အိုးရေသွန်းပမာဏဖြစ်ခြင်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဖြစ်ကြ၏။ ဤအချက်မှာမှတ်စုသစ်ခွကြီးမားတဲ့ရေထုကိုကြိုက်ကြဘူးကြောင်းခွင့်ပြုနိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့်စံပြသင်သည်သင်၏သစ်ခွစိုက်နဲ့ရေတစ်အတော်လေးသေးငယ်တဲ့ငွေပမာဏနှင့်အတူမှန်မှန်လောင်းထားတဲ့အတွက်သေးငယ်တဲ့အိုးသည်။ ဒါကြောင့်သင်တို့ကိုကယ်တင်မယ့်ကြီးမားတဲ့အိုးနှင့်ဆက်နွယ်လိမ့်မယ်လို့ပြဿနာတွေနိုင်ပါတယ်။
ဒီပြဿနာတွေကိုတစ်ခုမှာရေသစ်ခွရေမြင့်မားသောငွေပမာဏမှာလုံးဝကိုစုပ်ယူမရနိုငျသောဥပမာ, ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါရေထို့နောက်အိုးထဲသို့ပြေး။ ထို့ကြောင့်စက်ရုံအမြစ်များသေချာပေါက်အပြီးအပိုင်စိုစွတ်သောဖြစ်ကြသည်။ ဒီအခွအေနေစက်ရုံခံစားနေရပြီး, ရောဂါမပါရှိဘူးဆိုရင်။ ဒါဟာအမြစ်များကားပုပ်ပျက်တတ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမှာသူ့ဟာသူတငျပွ။ ဤအခြေအနေမှအဆိုပါသစ်ခွအဘို့အရေးကြီးသည်။ ဤအချိန်တွင်ကမရှိတော့မှလိုအပ်သောအာဟာရများနှင့်အတူသူတို့ကိုပေးနိုင်ပါသည်။ ဒီအခွအေနေရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းမရှိပါလျှင်, စက်ရုံကြောင့်ဖြင့်သေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကအားလုံးကုန်ကျစရိတ်မှာရှောင်ကြဉ်ရပါမည်။ သငျသညျရေမရှိသောအိုး၌ကြောင်းကိုသေချာအောင်အမြဲစိတ်တော်လိမ့်မယ်။
အဆိုပါစက်ရုံကျော်သွန်းလောင်းဖြစ်ပါတယ် - သိပ်ရေ
အခြားမည်သည့်စက်ရုံလိုပဲလည်းသစ်ခွအသက်ရှင်ဖို့ရေလိုအပ်ပါတယ်။ သို့သျောထိုအတွက်သစ်ခွဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရေအများကြီးမပေးနိုငျသောစာရွက်များကိုကျော်သူတို့ရဲ့သီးခြားဂုဏ်သတ္တိများ၏, လက်ျာသောက်သုံးသောမရှိမဖြစ်ဖြစ်ပါတယ်။
အမြစ်လုံးဝထောက်ပံ့နေကြသည်ပြီးနောက်ကျန်ရှိသောရေဖယ်ရှားပစ်ရမည်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်စက်ရုံအသေခံအံ့ဆဲဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်စက်ရုံစက်ရုံသွေ့ခြောက်သောစွန့်စားမှုထက်ဝေး သာ. ကြီးမြတ်မှသည်သွန်းလောင်းခြင်းကိုခံရသောစွန့်စားမှု။ သောကြောင့်သူတို့ရဲ့ဂုဏ်သတ္တိများ၏, ထိုသစ်ခွရေမရှိဘဲအလွန်ကောင်းစွာအချိန်ကြာမြင့်စွာဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ပါတယ်။ လက်ျာသတ္တုများပုံသွန်းအရှင်သစ်ခွစောင့်ရှောက်မှုအတွက် alpha နဲ့အိုမီဂါဖြစ်ပါတယ်။
2) အဆိုပါသစ်ခွတစ်နေရောင်ကိုးကှယျမဟုတျပါဘူး - အလွန်အကျွံတိုက်ရိုက်နေရောင်
များစွာသောအခြားအပင်များ, အမှန်ပင်နေရောင်ကဲ့သို့သစ်ခွမတူဘဲ, ဒါပေမယ့်သာဖြည့်ညှင်း၌တည်၏။ နေရောင်ထဲမှာရှည်လျားလွန်းဖြစ်ကြောင်းသစ်ခွ, မှောင်မိုက်အစက်အပြောက်ရတဲ့အားဖြင့်အထိခိုက်မခံဖြစ်။ ဒါဟာကောင်းတဲ့မရှာနှင့်စက်ရုံမသက်မသာခံစားရ၏။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျအပွင့်ထွက်ဘို့အသစ်တစ်ခုကိုပိုပြီးအရိပ်အာကာသရှာဖွေသင့်ပါတယ်။ အလင်း၏စာရေးအဆိုပါသစ်ခွ, ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမတိုက်ရိုက်နေရောင်ကူညီပေးသည်။
3) ညံ့ဖျင်းသောလေကြောင်းရန် - မဟုတ်ဆောင်းတွင်းအပူကျော်
ဒီအဖြစ်ကောင်းစွာသစ်ခွမကျမည်အကြောင်းကြောင့်ဧည့်ခန်းထဲမှာလေ, သိပ်ခြောက်သွေ့သောမဖြစ်သင့်ပါတယ်။ အဲဒီအစား, တကနွေးထွေးစိုစွတ်သောလေထုကြိုက်နှစ်သက်သည်။ အဆိုပါစိုထိုင်းဆပြင်ဆင်ထားရန်, ဥပမာစက်ရုံလုပ်နိုင်တဲ့ရေနှင့်ဖျန်းပါစေ။ သို့သော်ဤတစ်ခုသာယာယီအတိုင်းအတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာရေတိုင်ကီပေါ်အားမရအသုံးပြုပုံရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအတွက်စက်ရုံအပူပေးလေ့ရှိတယ်။ သို့သော်ဤတူညီသောပူလေကြောင်းကိုထိခိုက်ပျက်စီးစေခြင်းသစ်ခွကစိုထိုင်းဆသိပ်လိုအပ်လျော့နည်းစေတယ်လေ။ အကြောင်းမူကား,
4) ဖြတ်တောက်သည့်အခါသတိထားပါ - ဝေဟင်အမြစ်များသစ်ခွများအတွက်အရေးကြီးပါသည်
တစ်ဦးကထပ်မံစောင့်ရှောက်မှု note ကိုအိုးထဲက protrude သောအမြစ်များဖြစ်သောအကြောင်းအရာများကို။ ဤရွေ့ကားကိုကြည့်ဖို့ကောင်းတဲ့မရှိကြပေ။ သို့သော်ဝေဟင်အမြစ်သစ်ခွများအတွက်အရေးကြီးလှသည်။ သငျသညျအာဟာရ၏ထောက်ပံ့ရေးအဘို့, အရှင်တာဝန်ရှိစက်ရုံ၏ဗဟိုဖြစ်ကြပြီး။ တဦးတည်းချွင်းချက်ရှိပါသည်: အမြစ်များပုပ်စပ်လျက်ရှိ၏သို့မဟုတ်သေလွန်သောသူတို့သည် အကယ်. သူတို့ကဖယ်ထုတ်ခြင်းခံရသင်တန်းရပါမည်။
အဆိုပါသစ်ခွတစ်အတော်လေးနိမ့်အာဟာရလိုအပ်ချက်ရှိပါတယ်။ စက်ရုံ၏အသီးအရွက်များအဆင့်ဧပြီလကနေစက်တင်ဘာလဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သာဤအချိန်စက်ရုံနှစ်ယောက်ထက်ပိုကြိမ်တစ်လမျိုးအောင်ရပါမည်။ ထို့နောက်ဓာတ်မြေသြဇာမရှိတော့လိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်ထို့ကြောင့်တားမြစ်ထားသောဆက်လက်တည်ရှိသင့်ပါတယ်။
အဆိုပါသစ်ခွကငျြ့ချစ်တော်မူ၏။ ဤသည်ကိုလည်းအပူချိန်အမြင့်သက်ဆိုင်သည်။ အဆိုပါသစ်ခွနေထိုင်ရာအခန်းအတွင်းအပူချိန်ပြောင်းလဲဒါကြောင့်ဒီကိုကောင်းကောင်းခံစားရပြီးပန်းပွင့်ကိုထောက်ပံ့ပေးမထားဘူး။ ဒီကာကွယ်တားဆီးဖို့, ကအဖြစ်မြင့်မားသောနှစ်တွင်တစ်လျှောက်လုံးနှင့် ပတ်သက်. အထက်အခန်းအပူချိန်ကြောင့်ရဖို့သေချာရပါမည်။
လူကြီးများအတွက် Coloring သစ်ခွ
ကလေးတွေချိန်ညှိခြင်း - ကလေးများကျောဇော | ...
ကလေးမြားအတှကျအခနျးကုတင် | အိမ်နှင့်နေအိမ်
မြေထဲပင်လယ်ပရိဘောဂ | တိုက်ခန်းအိမ်သူအိမ်သား
ကို Creative အလှပြင်ဆင်ရေးစိတ်ကူးများ | တိုက်ခန်းအိမ်သူအိမ်သား
ကို Creative အလှပြင်ဆင်ရေးစိတ်ကူးများ | အခန်း
အသစ်ပြန်ပြုပြင်တဲ့ - ပုံသဏ္ဍာန်သို့ဟောင်းအိမ်သူအိမ်သားဆောင်ကြဉ်း
တိုက်ခန်းပြုပြင်မွမ်းမံ | အိမ်
ပျိုးခင်းကိုသတ်မှတ် | တိုက်ခန်းအိမ်သူအိမ်သား